———၊ ဇွန် ၊——— အော်ဟစ်ဆူပူဆုံးမလေ့ရှိသော လူလတ်တန်းစားမိဘတို့၏ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးများမှာ စိတ်ဓာတ်ကျနိုင်ခြေများပြီး ဒုက္ခပေးသည့် အပြုအမူများ လုပ်ဆောင်မှုများကြောင်း သိရသည်။ သားသမီးများနှင့် ရင်းနှီးချစ်ခင်သည့် ဆက်ဆံရေးရှိသည့် မိဘများပင်လျှင် ကြမ်းတမ်းသော အပြောအဆိုနှင့် စည်းကမ်းချက်များပေးပါက ဆယ်ကျော်သက်တို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ် သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း...
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– စာရေးသူရဲ ့မိတ်ဆွေ ကိုတာနဲ့ ထွေရာလေးပါး စကားလက်ဆုံကျနေပါတယ်။ ကိုတာက သူ့မိုဘိုင်းဖုန်းကို ကောက်ကိုင်ပြီး တစ်ခုခုသတိရမိသလို ပြောပါတယ်။ “အခုတလော ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ထဲမှာ တွေ့နေရတဲ့ သတင်းတစ်ခုရှိတယ်” “ဘာများလဲ” “မြန်မာနိုင်ငံက DVB...
———၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊——— အော်တစ်ဇင်အုပ်စုဝင်ရောဂါ (Autism Spectrum Disorder) လေးမျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီလေးမျိုးထဲမှာ အော်တစ်ဇင်ရောဂါ (Autstic Disorder) က ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများပြီး လူသိများတဲ့ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ အော်တစ်ဇင်ရောဂါက ကလေးအသက် ၂ နှစ်သားအရွယ် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကလေး၏စိတ်အခြေအနေကို သိနားလည်အောင် ကြိုးစားပါ ကလေးဟာ စိတ်ဓာတ်ကျနေသလားဆိုတာ အရင်ဆုံးသိနားလည်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ကလေးရဲ ့ဦးနှောက်ထဲမှာ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေမညီမျှတာကြောင့် ဒါမှမဟုတ် ပူဆွေးသောကကြုံရတာနဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေကြောင့် ကလေးတွေမှာ စိတ်ဓာတ်ကျဝေဒနာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေး၏အပြုအမူကို ဆန်းစစ်ပါ...
မွေးရာပါအရိုးပါးရောဂါအကြောင်း (Osteogenesis Imperfecta)
—၊ ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မွေးရာပါအရိုးပါးရောဂါအကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ A. မွေးရာပါ အရိုးပါးရောဂါဖြစ်ရင် အရိုးတွေက အလွယ်တကူကျိုးလွယ်ပါတယ်။ မကြာခဏ ကျိုးတတ်ပါတယ်။ မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တတ်ပြီး ကလေးဦးရေ ငါးသောင်းမွေးရင် တစ်ဦးမှာ...
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု လျော့ပါးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ . . .
———၊ ဒေါက်တာဖြိုးသီဟနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ၊——— Q. အခုဆိုရင် လူတန်းစားမျိုးစုံမှာ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေ အဖြစ်များနေတာကို တွေ့လာရပါတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ကလေးရဲ့သဘောသဘာဝကိုက လူကြီးနဲ့စာရင် ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုအားဖြင့် အားနည်းတယ်၊ အားနည်းတော့ လူကြီးနဲ့စာရင်...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— မိသားစုတစ်ခုမှာ သားသမီးသုံးယောက် ဖြစ်လာတဲ့အခါ အကြီးဆုံးနဲ့ အငယ်ဆုံးတွေထက် အလယ်အလတ်ကလေးတွေဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝမ်းနည်းမှုတွေကို အနည်းနဲ့အများ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ အလယ်ကလေးတွေက တခြားမောင်နှမတွေထက် စိတ်ဓာတ်ကျနိုင်ခြေ ပိုများပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်ကတော့ ပိုသန်စွမ်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။...